Isoda yokubhaka | Ndlela Best mhlophe Amazinyo Guide
Ndlela Best mhlophe Amazinyo Guide
amazinyo mhlophe kangako , amazinyo ziwenza , Ukubola ezingwevu iimveliso
Lwasekhaya mhlophe Amazinyo
izithuba ephawulweyo "Isoda yokubhaka"
Ekhaya-Based Iindlela mhlophe Amazinyo
indlela mhlophe amazinyo akho
Ukuba isibini omhle esikhazimlayo kwamazinyo ephupheni ukuba wonke nje uyazi indlela mhlophe amazinyo akho. Unakho ukwenza amazinyo akho mhlophe ngokuba mhlophe kunye amazinyo nekhithi ezingwevu okanye unyango lwamazinyo. nokuba, ezingwevu amazinyo zilandelayo nayiphi na kwezi ndlela ngokuqhelekileyo ixabisa ophezulu kakhulu ukuba inkoliso yabantu abakwazi ukuhlawula. Ngaphezu koko, ezi ndlela abasoloko babenebhongo kwaye isiphumo abaninzi babenqwenela. Ngaphandle amazinyo phezu-the-counter iikiti ziwenza notyando eninzi zamazinyo, unayo ukhetho olunye indlela mhlophe amazinyo akho kunceda ufumane ichaphaza-free, ePearly amazinyo amhlophe ngaphandle kuphosa ngumthwalo kuni. Uza kuba nakho ukwazi indlela mhlophe amazinyo akho usebenzisa amazinyo ekhaya ezingwevu indlela. Ekhaya amazinyo ezingwevu iindlela badla ukusebenza ngempumelelo ngaphezulu kwezinye iindlela. Ukongeza koko, ubuchule ekhaya-based kukubiza encinane kakhulu ukuba unako ngokuqinisekileyo ukuhlawula. Ngezantsi iindlela indlela mhlophe amazinyo akho kwi ephantsi ngeendleko ezifikelelekayo.
Isoda yokubhaka iyafumaneka kwi-kwikhitshi phantse yonke indlu aze indlela mhlophe amazinyo akho. Abantu basebenzisa ngesoda yokubhaka njenge tastemaker. Isoda yokubhaka kwakhona kusetyenziswa xa kucocwa. Isebenza kakuhle ukususa ivumba elitsarhayo ukusuka efrijini. Uyakwazi ukusebenzisa nesoda yokubhaka ukuze uhlamba amazinyo akho. Yokubhaka na esirhabaxa ngokwendalo yaye esi uyakunceda ukuba ukususa elimdaka kumphezulu ekupheleni amazinyo akho. Ngezinyo ziwenza, kuthatha icephe yesoda, ithontsi ezimbalwa lamanzi kunye ibrashi ufumile ethambileyo-bristled. Thatha soda kwisihlahla yakho uze udibanise amathontsi amanzi kuyo ukwenza intlama kulo. Ngoku nkxu yisaltbush kungena Intlama uhlamba amazinyo akho. Unako ukulandela le ndlela kangangoko kanye ngeveki nganye.
Kukho ezinye iziqhamo ezinceda indlela mhlophe amazinyo akho; kodwa amaqunube kusebenza okona ukuze mhlophe amazinyo akho. Le yenye ilula, amazinyo ikhaya olusebenzayo ngaphantsi eninzi izixhobo ziwenza. Strawberry iqulethe malic acid njengoko isithako esisebenzayo. Le nto organic inceda kwi indlela mhlophe amazinyo akho kukhululeke amabala kwi kumphezulu kwamazinyo. Kuba imiphumo, ungasebenzisa yokubhaka kunye amaqunube. Sika enye eliphakathi namaqunube ubungakanani zeento zibe ngamaqhekeza amancinci uthabathe umatshini kwisitya. Emva koko ke fakela isiqingatha ukhamba yesoda ngokwesiqhamo noMashe umxube ngefolokhwe ukuxuba kakuhle de lifumana ngokufanayo ipulpy. Ngoku esi Umxube amazinyo yakho ibhrashi ulinde imizuzu embalwa. Emva koko ukupulisha umlomo wakho kakuhle ngamanzi okungenanto. Ungakwenza oku kanye ngeveki nganye.
Le yenye indlela elungileyo indlela mhlophe amazinyo akho Ekhaya. Kwi izindlu ezininzi, lusetyenziselwa intsholongwane amanxeba nezinto imikrwelo engenamsebenzi. Ingasetyenziswa ngokuba amazinyo whitener obalaseleyo. toothpastes eyona eninzi ziqulathe peroxide njengoko yezinto eziphambili. Ungayisebenzisa njenge acoce kwaye amazinyo whitener. Thatha ikomityi enye-sesine peroxide emlonyeni wakho lwalundumzela malunga omnye ngomzuzu. Emva koko ukupulisha umlomo wakho ngocoselelo ngamanzi okungenanto. Hlamba amazinyo akho emva kokusebenzisa peroxide ukufumana isiphumo ngcono. Uyakwazi ukusebenzisa peroxide kanye yonke imihla ukuze ufumane isiphumo eyona ezilindelekileyo.
Ngeposi yi mhlophe Amazinyo Guide - Isilimela 4, 2016 nge 7:25 AM
iindidi: Lwasekhaya mhlophe Amazinyo tags: Isoda yokubhaka, indlela mhlophe amazinyo akho, amazinyo eliqaqambileyo, mhlophe amazinyo akho
Nentembelo Uncumo namazinyo White
Advice Yokunxibelelana Xa ufuna ukuzenza mhlophe mazinyo
Ezingwevu Amazinyo Tips ungazama Namhlanje!
lula, Iindlela engaxabisi qambisa uncumo lwakho
Ukuphelisa Ukuba Yellow sineka uze Fumana uncumo Bright White
ukufunxa kumabala Isoda yokubhaka ubuhle uncumo ndlela ibhetele mhlophe amazinyo Qambisa uncumo lwakho ebumhlotsheni uncumo lwakho Ncuma Bright White Ncuma dazzle cleanings zamazinyo kwigumbi wamazinyo ngayo Fumana A Smile Bright White amazinyo ekhaya ziwenza ziwenza ekhaya indlela mhlophe amazinyo indlela mhlophe amazinyo akho laser amazinyo ziwenza Laser ezingwevu amazinyo ngendlela yemvelo mhlophe amazinyo Susa gqwanci Ukususa amabala Amazinyo uncumo dazzle Ndingathanda ipere yezinto zokukhafula kwiishethi amazinyo isithambiso kit amazinyo eliqaqambileyo inkathalo amazinyo amazinyo esempilweni amabala amazinyo amazinyo ziwenza amazinyo yellow Tips Yokuthintela amabala Amazinyo intlama yamazinyo Ukubola ezingwevu iimveliso Vitamin C Ezingwevu Amazinyo Tips ungazama Namhlanje! ezingwevu amazinyo akho mhlophe amazinyo am amazinyo mhlophe amazinyo mhlophe ekhaya mhlophe amazinyo akho Mhlophe mazinyo Easy uncumo mhlophe amazinyo amhlophe yabengezela amhlophe mazinyo tips amazinyo amhlophe yellow nentsini
Umxholo WordPress ngokuthi HeatMapTheme.com